eXamYo သတ်မှတ်ချက်များ | စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရာတွင်လှည့်စားခြင်းအတွက် Micro Earpiece, Camera နှင့် Watch - eXamYo.com
ဤစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောအခြေအနေများ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအထွေထွေအခြေအနေများ) သည် Luis B. Corraliza (eXamYo.com) မှကမ်းလှမ်းသောထုတ်ကုန်များကို၎င်း၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက် www.eXamYo.com တွင်ရရှိနိုင်သည့်ကတ်တလောက်တွင် ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထိန်းချုပ်သည်။
အထွေထွေအခြေအနေများသည် eXamYo.com နှင့် ၀ ယ်သူ (ဝယ်သူ) တို့အားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရအထက်ဖော်ပြပါစာမျက်နှာမှအမှာစာပြုလုပ်ပြီးလက်ခံသည့် အချိန်မှစ၍ အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများစွာကိုပေးသည်။ ၎င်းတို့သည်နှစ်ဖက်စလုံးမှမဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဖောက်သည်တစ် ဦး အဖြစ်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါလက်ခံမှုသည်အမိန့်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူသည်ဤအခြေအနေများကိုသေချာစွာဖတ်ရှုရမည်။
1 ။ ကွားပါတီများ
ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်အမည် - Luis B. Corraliza၊ အခွန် ID: 04857077-Y, မှတ်ပုံတင်ရုံး - C / S. Juan Bautista - Talavera de la Reina - Toledo
E-mail: info @ examyo com
www.eXamYo.com ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် ၀ ယ်ယူသူမည်သူမဆိုမှာယူမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုလက်ခံသည့်အချိန်တွင်ထိုအရာအားလက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်းဖောက်သည်ဟုသတ်မှတ်လိမ့်မည်။
ဝယ်သူသည်ဤကဲ့သို့မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်ပြီးအောက်ပါအချက်အလက်များကိုပေးရမည် - အမည်သည်အမည်နှင့်အမည်၊ စီးပွားရေးအမည်၊ CIF / NIF၊ ငွေတောင်းခံလွှာလိပ်စာ၊ ပေးပို့မည့်လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အီးမေးလ်။ ဤအချိန်တွင်သင်သည်ဤအထွေထွေအခြေအနေများကိုလက်ခံရမည်။
၀ ယ်ယူသူမှပေးသောဤအချက်အလက်များကိုဝက်ဘ်ဆိုက်၏အသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများ ("အခြေအနေများ" အပိုင်း) နှင့်အညီဆောင်ရွက်လိမ့်မည်
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် eXamYo.com မှ ၀ ယ်ယူသူသည်ဝယ်ယူသောထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူခြင်း။ ဤရွေ့ကားပုဂ္ဂလိကစားသုံးရန်ရည်ရွယ်လေဆာထောက်ပြထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။
ဤကမ်းလှမ်းချက်သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက် www.eXamYo.com တွင်ပေါ်လာသောထုတ်ကုန်များနှင့်သာကန့်သတ်ထားပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဝယ်ယူမှုများအတွက်တရားဝင်သည်။
ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီတွင်ကုန်ပစ္စည်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ မော်ဒယ်၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ကျွန်းဆွယ်နှင့်ဘောလရားစ်များ၌ပါ ၀ င်သော VAT နှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်ရရှိနိုင်မှုကာလကိုပြသသည့်အချက်အလက်စာရွက်များရှိသည်။ ဝယ်သူ။
ဖောက်သည်သည်မှာထားသည့်အမှာစာကိုသဘောတူလက်ခံသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ယခင်ကဖောက်သည်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်၊ ဖောက်သည်သည်အထွေထွေအခြေအနေများကိုလက်ခံထားရမည်။
အော်ဒါမှာယူမှုကုန်ပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်းအတွက်ဖောက်သည်သည် eXamYo.com အကောင့်သို့ငွေလွှဲရမည်။ လွှဲပြောင်းရာတွင်သင်သည်အမှာစာနံပါတ်ကိုညွှန်ပြရမည်။ (နံပါတ်သည်အမိန့်ပြီးဆုံးသောအခါစနစ်ကအလိုအလျောက်သတ်မှတ်ပေးသည်); eXamYo.com သို့တူညီသောအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းအပြင်
ငွေလွှဲခသည်အမိန့်ပြီးဆုံးသည့် နေ့မှစ၍ ၁၀ ရက်အတွင်းဝယ်ယူပြီးနောက်ပေါ်လာမည့်ဘဏ်အကောင့်သို့ငွေလွှဲခြင်းကိုပြုလုပ်ရမည်။ ထိုကာလအတွင်းငွေပေးချေမှုအထောက်အထားမရှိပါကအမိန့်ကိုအလိုအလျောက်ဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။
ဖောက်သည်သည်ငွေပေးချေမှုကိုသူ၏အကြွေးဝယ်ကတ်သို့မဟုတ် Virtual POS မှတဆင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အမိန့်ပြုလုပ်ချိန်တွင်လုပ်ငန်းကို ၁၀၀% သေချာအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
6 ။ အမိန့်များဖြန့်ဝေ
အမှာစာများပေးပို့သည့်အချိန်သည်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုရေးစပ်သောထုတ်ကုန်များပေါ် မူတည်၍ ၀ က်ဘ် www.eXamYo.com ၏ကတ်တလောက်ရှိထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီ၏ tabs များ၌ညွှန်ပြနိုင်သည်။ အမှာစာများပေးပို့ခြင်းအတွက်အချိန်တွက်ချက်ရန်အတွက်ရရှိနိုင်သောစည်းကမ်းချက်များသည် ၀ ယ်သူကအမှာစာပေးချိန်တွင်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ကြော်ငြာပေါ်လာမည့်သူများဖြစ်သည်။
eXamYo မှညွှန်ပြထားသောဘဏ်ငွေစာရင်းနံပါတ်တွင်ငွေပေးချေခြင်းသို့မဟုတ်ငွေပေးချေခြင်းအားဖြင့်လိုင်းမှငွေပေးချေမှုကိုသဘောပေါက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားကိုပေးပို့သည့်တွက်ချက်မှုအတွက်ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုပုံစံအတွက်တရား ၀ င်ပြုလုပ်ထားသောအမှာစာများကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ .com ။
သို့သော်ရရှိနိုင်သောဤကာလသည်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်မှုကုန်ဆုံးရန်တူညီသောကုန်ပစ္စည်းများအတွက်တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာကြားမှုတွင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ပေးပို့မည့်အချိန်သစ်ကိုအချိန်တိုအတွင်းဖောက်သည်အားညွှန်ပြလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်း၏အဆုံးသည်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပါကအလားတူလက္ခဏာများမဟုတ်သည့်ကုန်ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းသည့်ထုတ်ကုန်နှင့်တူသောစျေးနှုန်းကိုရွေးချယ်ခြင်း (သို့) သင်၏အမိန့်ကိုဖျက်သိမ်းခြင်း၊ အမှာစာများအရအော်ဒါတွင်ပေးဆောင်ရမည့်ငွေများကိုကြိုတင်ပြန်ပေးခြင်းအားဝယ်သူအားအကြံပေးလိမ့်မည်။ ကြိုတင်ပေးငွေ
eXamYo.com ကြောင့်နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုရှိနိုင်မှုသက်တမ်းအရ ၁၀ ရက်ထက်ပိုသောကြာချိန်တင်ပို့မှုနှောင့်နှေးခြင်းသည်ဖောက်သည်အားသူ၏အီးမေးလိပ်စာသို့ info@examyo.com သို့လိပ်မူ။ အီးမေးလ်ဖြင့်စာရေးလျှင်၎င်း၊ ကြိုတင်ပေးချေထားသောငွေများ၊ လက်ရှိသို့မဟုတ်အနာဂတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တောင်းဆိုချက်မရှိဘဲတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်သောငွေ။
ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သည့်အချိန်သည် ၀ ယ်ယူသူမှရွေးချယ်သောအမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။ ဤဝေါဟာရများသည်အမြဲတမ်းအနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ပြီးမည်သည့်အချိန်တွင်အာမခံထားသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်အထုပ်ကိုငြင်းပယ်ခြင်း (သို့) ဝယ်ယူခြင်းဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။ ဖောက်သည်ကသူ၏လက်ခံမှုကိုလက်ခံပြီးကျွန်ုပ်ရရှိသောကုန်ကျစရိတ်များကိုနားလည်သည်။ သူသည်ဤအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဝယ်ယူပြီးစီးမထားဘူးဆိုရင်။
eXamYo.com တွင်မပါ ၀ င်သောအကြောင်းပြချက်ကိုသူတို့ပေးပို့ပြီးခုနစ်ရက်အတွင်းဖောက်သည်သို့မပို့ပါကကြိုတင်ပေးချေထားသည့်ငွေအားလုံးကို၊ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူထံသို့ပြန်လာပါလိမ့်မည်။ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်မည်သည့်တောင်းဆိုချက်မျှမပါဘဲ၊ လက်ရှိသို့မဟုတ်အနာဂတ်၊ တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်။
အမိန့်ပို့ခြင်းအချက်အလက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ပေးပို့သည့်လိပ်စာတွင်တစ်အိမ်မှတစ်အိမ်ပို့ဆောင်ခြင်းပြုလိမ့်မည်။ ဤလိပ်စာ၏နောက်ဆက်တွဲပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုသည် ၀ ယ်ယူသူကကျခံမည့်ကုန်ကျစရိတ်များစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ငွေတောင်းခံလွှာပျောက်နေပါကဝယ်သူကငွေတောင်းခံလွှာ၏အမည်နှင့်အမှာစာနံပါတ်ကိုဖော်ပြထားသော info@examyo.com လိပ်စာသို့အီးမေးလ်ဖြင့်တောင်းခံနိုင်ပြီး၎င်းကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ထပ်မံပို့ပေးသည်။
အကယ်၍ ပို့ဆောင်သည့်အချိန်တွင်ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်၏ထုပ်ပိုးမှုများကိုကိုင်တွယ်ရန်မလိုဘဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သည်ဆိုလျှင်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပျက်စီးစေခြင်းသို့မဟုတ်ထိုနည်းတူပင်အမှားအယွင်းရှိခြင်း လက်ခံရရှိသည့်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ၀ ယ်ယူသူကပေးပို့စာကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးပြန်ပို့ရန်တိုက်တွန်းနိုင်ရန်အမိန့်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်း (info@examyo.com လိပ်စာသို့အီးမေးလ်ဖြင့်) eXamYo.com သို့ဆက်သွယ်ရမည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကုန်ပစ္စည်းနှင့်၎င်းကိုအသစ်တစ်ခုဖြင့်အစားထိုးခြင်းနှင့်အတူတူပင်တစ်ခုကပေးရသောစျေးနှုန်းပြန်အမ်းခြင်းမဟုတ်ပါ။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ထုတ်လုပ်ချို့ယွင်းချက်, ထုတ်ကုန်ကိုဖြည်ပြီးနောက်သာလျှင်တန်ဖိုးရှိသောတန်ဖိုးရှိသောချွတ်ယွင်းသောသို့မဟုတ်မှားယွင်းသောထုတ်ကုန်များကို info@examyo.com လိပ်စာသို့လိပ်စာလက်ခံရရှိသည့်အီးမေးလ်ဖြင့်အီးမေးလ်ဖြင့်ပေးပို့သည့်ပထမ ၂၄ နာရီအတွင်းကုန်ပစ္စည်းများမှရရှိသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုဖော်ပြပြီးအီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ရမည်။ သက်ရောက်မှုရှိသောကုန်ပစ္စည်းပြန်ပို့ခြင်းနှင့်၎င်းကိုအသစ်တစ်ခုဖြင့်အစားထိုးခြင်း၊ အတူတူပင်ပေးရသောစျေးနှုန်းပြန်အမ်းခြင်းမဟုတ်ပါ။
သင်၏အမှာစာကိုမပေးပို့သေးပါကဖျက်သိမ်းမှုကိုသာလက်ခံလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်းသင်ဖျက်သိမ်းလိုပါကပေးပို့ခြင်းမပြုပါကသင်မှာယူနိုင်ပြီး ၁၀ ယူရိုကုန်ကျစရိတ်ကိုယူပြီးအမိန့်အပြောင်းအလဲနဲ့ငွေပေးချေပြီးသောငွေပမာဏနှင့်လျှော့လိမ့်မည်။ သငျသညျပေးပို့အပေါ်သို့ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ဘို့သင်၏အမိန့်ပေးဆောင်ကြပြီမဟုတ်လျှင်, သင်ပေးလိမ့်မည်သည့်အကောင့်များထဲမှတစ် ဦး ဘဏ်အပ်ငွေမှတဆင့် 10 €€ပေးဆောင်ရပါမည်, အဲဒီလိုမ eXamYo.com နှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောကြွေးမြီယူဆတယ်နှင့်ဝန်ခံ ဖော်ပြထားသောငွေပမာဏကိုပြန်လည်ရယူရန်သင့်လျော်သည်ဟုယူဆသည့်ဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများကိုဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။
ဝယ်သူ / ၀ ယ်သူ၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်တောင်းဆိုထားသောထုတ်ကုန်သည်သင်လိုချင်သောအရာဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ သံသယဖြစ်လျှင်ဝယ်သူ / ဝယ်သူက eXamYo.com သို့ ဆက်သွယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၀ ယ်ယူခြင်းမပြုမီစုံစမ်းရန်ဖြစ်သည်။
eXamYo.com မှလွဲ၍ အခြားအကြောင်းပြချက်များအရ ၀ ယ်ယူသူသည်ဝယ်သူ / ဝယ်သူမှ ၀ ယ်ယူခြင်းကိုငြင်းဆိုလျှင်၎င်းသည်ဝယ်သူထံသို့ပို့ဆောင်စရိတ်ကိုတောင်းခံနိုင်သည်။ အမိန့်များအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဖျက်သိမ်းခြင်း။
၀ ယ်ယူသောကုန်ပစ္စည်းသည်စာချုပ်နှင့်မကိုက်ညီပါကသန့်ရှင်းမှုကိုတောင်းဆိုရန်အမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများဖြင့် ၀ ယ်သူအားကုန်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်မှုတွင်အာမခံချက်များအတွက်ဇူလိုင် ၁၀ ရက်၊ ဥပဒေအမှတ် (၂၃/၂၀၀၃၊ ဥပဒေ ၂၃/၂၀၁၃) ၏တရားဝင်မူဘောင် မဖြစ်နိုင်သို့မဟုတ်အချိုးအစားမညီမျှမှုမဟုတ်လျှင်ပစ္စည်းကိုပြုပြင်ရန်သို့မဟုတ်အစားထိုးရန်လိုအပ်သည်။ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်အစားထိုးခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါကသို့မဟုတ်မအောင်မြင်ပါကစားသုံးသူသည်စျေးနှုန်းလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်စာချုပ်ရပ်စဲခြင်းကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်တင်ပို့လက်ခံရရှိသည့် နေ့မှစ.2နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးအာမခံရှိသည်။ ထုတ်ကုန်၏ထုတ်လုပ်သူအာမခံချက်အဘို့တစ်ခုတည်းကိုသာတာဝန်ယူဖြစ်ကြပြီးလိုအပ်သောနည်းပညာနှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းထောက်ခံမှုပေး။ အကယ်၍ ဖောက်သည်သည်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemနာတစ်စုံတစ်ရာရှိပါကထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး စီမှဆုံးဖြတ်သည့်နည်းပညာအကူအညီပေးရေးဝန်ဆောင်မှု (SAT) ကို ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။
ဤအချက်ကြောင့် eXamYo.com သည် ၀ ယ်ယူသူအားအမှာစာများ၏ကုန်ပစ္စည်းများပေးပို့သည့်အချိန်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိခြင်းကို၎င်းတို့အားပုဂ္ဂလိကစားသုံးရန်ရည်ရွယ်ထားသောမြင်သာထင်သာပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်နားလည်လိမ့်မည်။
eXamYo.com ၏အာမခံသည်ထုတ်လုပ်သူမှတိုက်ရိုက်ကမ်းလှမ်းသည့်မှာကြားသည့်နေ့မှ ၆ လမှ ၆ လအထိဖြန့်ဖြူးသူအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုမအောင်မြင်ပါက eXamYo.com သည် ၀ ယ်သူအားထုတ်လုပ်သူ၏လိပ်စာကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း (သို့) အစားထိုးခြင်းအတွက်ပေးလိမ့်မည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို ၀ ယ်သူကဤပြန်အမ်းငွေကိုကုန်ကျမည်။
· ၆ လအကြာနှင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်ကိစ္စများ၌လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိခြင်းပေါ်လာသောအခါထုတ်လုပ်သူသည်အာမခံချက်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်လွတ်လပ်သောကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ၏အစီရင်ခံစာကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။ အာမခံကာလအတွင်းအမှားအယွင်းမရှိသောသို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောလည်ပတ်မှုသိသာသောကိစ္စများတွင်ပြproblemနာမရှိပါ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကုန်ပစ္စည်းအားစားသုံးသူအားဆုံးရှုံးသောအချိန်ကာလအတွင်းအာမခံချက်ကာလ၏တွက်ချက်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားသည်။ ဥပမာ၊ အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို ၁၅ ရက်ကြာပြုပြင်ပါက၊ အာမခံကာလသည်မူလစီစဉ်ထားသည်ထက် ၁၅ ရက်နောက်ကျလိမ့်မည်။
ဤအာမခံချက်ကိုရရှိနိုင်ရန်အတွက် ၀ ယ်ယူသူသည် info@examyo.com လိပ်စာသို့အီးမေးဖြင့်အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ရမည်။ ငွေတောင်းခံသူ၏အမည်၊ အမှာစာအရေအတွက်၊ ငွေတောင်းခံလွှာနှင့်အကြောင်းရင်း လိုက်နာမှုမရှိခြင်း။
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းအားပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သင်လိုအပ်ပါကပို့ရန်လိပ်စာနှင့် RMA နံပါတ်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ ပို့ဆောင်စရိတ်ကို ၀ ယ်ယူသူမှပေးမည်။ ပျက်စီးသွားသောပစ္စည်း၏ဘေးတွင် ၀ ယ်ငွေပြေစာမိတ္တူနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုကမှန်ကန်စွာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအာမခံသဘောတူညီချက်တို့ပါ ၀ င်ရမည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူမှ eXamYo.com သို့ ၀ င်ရောက်ပြီး ၁၄ ရက်အကြာတွင်၊ အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းကိုနည်းပညာပံ့ပိုးမှုကညွှန်ပြသည့်နေရာတွင်မပို့နိုင်သေးပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဌာနသည်ဤတောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါက RMA တောင်းဆိုမှုကိုပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်ပြီးတင်ပို့မှုကိုလက်ခံပါကပယ်ချလိမ့်မည်။ သင်ဆန္ဒရှိတိုင်း RMA နံပါတ်အသစ်ဖြင့်အာမခံစနစ်အသစ်ကိုပြန်လည်တောင်းခံနိုင်သည်။ ပျက်စီးနေသောအစိတ်အပိုင်းကိုထုပ်ပိုးမှုကြောင့်လက်ခံရရှိပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဂရုမစိုက်ပါ။ ဖောက်သည်အားပြtheနာအားအကြောင်းကြားခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအေဂျင်စီမှတိုက်ရိုက်ဖြေရှင်းခြင်း။ ဤလက္ခဏာများနှင့်မကိုက်ညီသောမည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုဤအာမခံသည်အခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့်တိုင်သင့်ထံသို့ပြန်လည်ပေးပို့လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်လုံခြုံမှုမရှိသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးအထုပ်ပျက်လျှင်၊ ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ဝယ်သူမှတာဝန်ယူရမည်။
အာမခံချက်၏ -Process ။
·ပြုပြင်သို့မဟုတ်အစားထိုး။ ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမှာကထုတ်ကုန်ကိုအသစ်တစ်ခုဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် (သို့) အစားထိုးရန်ဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီမှရရှိသောကုန်ကျစရိတ်များကို အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမည့်သူသည်ရောင်းသူအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုသည်အခြားတစ်ခုနှင့်အချိုးမညီလျှင်၊ ရောင်းသူသည်စားသုံးသူမည်သူမျှမယူဆပါကသူတို့၏အကျိုးစီးပွားနှင့်အဆင်ပြေဆုံးကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ပိုမိုဆိုးကျိုးများ။ ဆောင်းပါးတပုဒ်လုံးရရှိနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါကဥပဒေ ၂၃ တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သောသို့မဟုတ်ပိုမိုကြီးမားသောအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသောဆောင်းပါးတစ်ခုအားပြောင်းလဲခြင်း၊ အမြဲတမ်းအသိပေးခြင်းနှင့်ကြိုတင်လက်ခံခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ စားသုံးသူကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်းအတွက်အာမခံချက်များ (ဇူလိုင် ၁၀ ရက်၊ ၂၀၀၃)၊ (၁၁-၁၇-၂၀၀၃ ရက်စွဲပါ BOE အမှတ် ၁၆၅)
·စျေးနှုန်းလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်စာချုပ်၏ resolution ။ ကုန်ပစ္စည်းကိုအသစ်တစ်ခုဖြင့်အစားထိုးရန်မဖြစ်နိုင်လျှင် (သို့မဟုတ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်)၊ ပြုပြင်ခြင်း (သို့) အစားထိုးခြင်းသည်ကုန်ပစ္စည်းကိုလိုက်ဖက်ညီသောအခြေအနေများတွင်အချိန်ကာလ၏ချဲ့ကားပြောဆိုမှုများဖြစ်သည့်အခါထွက်ခွာရန်အသုံးမပြုသောအခါ ... စားသုံးသူသည်မေးမြန်းခြင်းကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည် စျေးနှုန်းလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်စာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းခြင်း (လိုက်နာမှုမရှိခြင်းသည်အရေးကြီး သ၍) ထို့အပြင်စားသုံးသူသည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်လျော်ကြေးပေးရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
eXamYo.com သည်ကုမ္ပဏီထက် ကျော်လွန်၍ အကြောင်းပြချက်များကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများကသတ်မှတ်ထားသောကာလဖြစ်သောကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းအားသတ်မှတ်ထားသောကာလအတွင်းကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်းအတွက်ကတိက ၀ တ်ပြုခြင်းမရှိဘဲသုံးစွဲသူထံသို့စာတိုက်မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းကိုသာမန်မေးလ်ဖြင့်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ အာမခံထားသည့်သင်္ဘောတင်ပိုနှစ်သက်ပါကအမြန်အမြန်စာပို့သူမှအမြန်ပြန်ပို့ရန်အတွက်ယူရို ၃ ဒေါ်လာပေးရမည်ဆိုပါက ၀ ယ်သူသည်မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှု၊ ပျက်စီးမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်မဆိုတာ ၀ န်ရှိသည်။ ဒီငွေပမာဏကိုဘဏ်ငွေလွှဲသို့မဟုတ်ကဒ်ဖြင့်ပေးချေလိမ့်မည်။
B) အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါပစ္စည်းကိရိယာများကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးပါက၎င်းသည်ဖောက်သည်ထံသို့ပြန်လည်အပ်နှံရမည်။ ဝယ်ယူသူမှထုတ်လုပ်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုတွက်ချက်ပြီးကုန်ကျစရိတ်စုစုပေါင်း ၁၅ ယူရိုရှိသည်။ ပြန်ပို့ခြင်းကိုပုံမှန်စာဖြင့်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ၀ ယ်သူသည်မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှု၊ ပျက်စီးမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်မဆိုတာ ၀ န်ရှိသည်။ အာမခံထားသောသင်္ဘောကိုပိုနှစ်သက်ပါကအမြန်အမြန်အမြန်ပြန်ပို့ခြင်းအားဖြင့်အမြန် ၃ အမြန်၊ ၁၈ ယူရိုတိုးနိုင်သည်။ စုစုပေါင်း။ ဒီငွေပမာဏကိုဘဏ်ငွေလွှဲသို့မဟုတ်ကဒ်ဖြင့်ပေးချေလိမ့်မည်။
ဂ) အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါ၊ ပစ္စည်းကိရိယာပျက်ကွက်မှုသည်အာမခံအခြေအနေများချိုးဖောက်နေသည်ကိုတွေ့ရှိပါကအာမခံချက်ကိုပယ်ဖျက်လိမ့်မည်။ ပစ္စည်းကို ၀ ယ်ယူသူထံပြန်လည်အပ်နှံမည်ဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်း ၁၅ ယူရိုခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များအပြင်ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းကုန်ကျစရိတ်များကိုပေးချေရမည်။ ပြန်ပို့ခြင်းကိုပုံမှန်စာဖြင့်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ၀ ယ်သူသည်မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှု၊ ပျက်စီးမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်မဆိုတာ ၀ န်ရှိသည်။ အာမခံထားသောသင်္ဘောကိုပိုနှစ်သက်ပါကအမြန်အမြန်အမြန်ပြန်ပို့ခြင်းအားဖြင့်အမြန် ၃ အမြန်၊ ၁၈ ယူရိုတိုးနိုင်သည်။ စုစုပေါင်း။ ဒီငွေပမာဏကိုဘဏ်ငွေလွှဲသို့မဟုတ်ကဒ်ဖြင့်ပေးချေလိမ့်မည်။
ပစ္စည်း၏တင်ပို့မှုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီးနောက်ကုန်ကျစရိတ်သည်ယူရို၏တောင်းဆိုချက်အရသော်လည်းကောင်း၊ အမိန့်တွင်မမှန်မကန်ဖြစ်သောကြောင့်မည်သည့်လိပ်စာသို့မဟုတ်မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုနှင့်မဆိုခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစရိတ် ၅ ယူရိုသည်ဝယ်သူမှကျခံရမည်။
အထုပ်ကိုလိပ်စာမှားယွင်းစွာပြန်ပို့လျှင်ပျက်ကွက်ခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း (သို့) ငြင်းဆန်ခြင်းမပြုပါကကျွန်ုပ်တို့ရုံး၌လက်ခံရရှိသည့်အခါဝယ်သူအားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ တင်ပို့မှုအသစ်တောင်းခံပါကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်အဖြစ် ၅ €ပေးရပါမည်။ သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသဘောတူရန်ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှအသိပေးချက်မှသင်တစ်လရလိမ့်မည်။ ဤအချိန်ပြီးနောက်သင်၏စာမူများနှင့်၎င်းတို့မှပေးသောငွေပမာဏကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်စွန့်လွှတ်ခြင်းကိုလျစ်လျူရှုရန်မည်သည့်တုံ့ပြန်မှုကိုမျှစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
·ဝယ်သူက eXamYo.com ၏အာမခံတံဆိပ်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်အားလုံး၏ထုတ်လုပ်သူ (serial နံပါတ်နှင့်လုံခြုံရေးတံဆိပ်ပါသည့်တံဆိပ်များအပါအ ၀ င်) ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်း၊
ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲပညာရှင်များ၏ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်မူရင်းဖွဲ့စည်းမှုတွင်မပါ ၀ င်သောနောက်ဆက်တွဲပြုပြင်မွမ်းမံမှုများသို့မဟုတ်တိုးချဲ့မှုများကြောင့်ပျက်ကွက်ခြင်း။
·ဘက်ထရီကဲ့သို့သောအသုံးဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများ။ ထပ်ခါထပ်ခါအားသွင်းခြင်း / အားပြန်သွင်းခြင်းကြောင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းလျော့နည်းခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏သဘောသဘာဝနှင့်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုနှင့်လုံခြုံမှုဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များအရမည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုမည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုပို့ဆောင်ရမည့်အချိန်နှောင့်နှေးခြင်း၊ မသေချာခြင်း၊ လက်ခံရရှိခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအမှားများအပါအ ၀ င်မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းကိုမဆိုပြန်ပို့ခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။ သူတို့အစားထိုးမည်ဖြစ်ပြီးဘယ်တော့မှပြန်လည်ပေးအပ်လိမ့်မယ်။ ငါတို့ထံမှ ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဤအခြေအနေများကိုဖတ်ပြီးလက်ခံကြောင်းအတည်ပြုသည်။
ဖောက်သည်တစ် ဦး အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုမီလက်ရှိအထွေထွေအခြေအနေများကိုဖတ်ပါ။ အမှာစာလက်ခံပြီးသည်နှင့်အထွေထွေအခြေအနေများကိုလေးစားပါ။
eXamYo.com ၏ 11. တာဝန်ဝတ္တရား
၁၃။ eXamYo.com ၏အခွင့်အရေး
ဤစာချုပ်ပေါ်ပေါက်စေသည့်မည်သည့်အမျိုးအစားမဆိုအသိပေးချက်များ၊ တောင်းဆိုမှုများနှင့်အရေးအသားများ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် eXamYo.com ၏လိပ်စာကိုလက်ရှိအထွေထွေအခြေအနေများတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းနားလည်ရမည်။
www.eXamYo.com ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အသုံးပြုမှုအခြေအနေများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကို eXamYo.com ကပိုင်ဆိုင်သည်။ ၎င်း၏ပါဝင်မှုများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ စာသားများ၊ ဒီဇိုင်းနှင့်ဆော့ဝဲလ်များအားလုံးသည် eXamYo.com ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံး၊ အကန့်အသတ်မရှိ၊ ၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်ပါ ၀ င်မှုများကိုဥာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်၊ စက်မှုဇုန်နှင့်မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာစာချုပ်များဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။
eXamYo.com သည်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏ပါ ၀ င်မှု၏တိကျမှုနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေရန်ကြိုးစားအားထုတ်သော်လည်းအမှားအယွင်းများသို့မဟုတ်တိကျမှုများပါဝင်နိုင်သည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၄ ​​င်း၏ပါ ၀ င်မှု၏တိကျမှု၊
eXamYo.com သည် eXamYo.com ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်လင့်ခ်များချိတ်ဆက်ထားသောတတိယပါတီ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်ပါ ၀ င်သောသတင်းအချက်အလက်များအတွက်တာ ၀ န်ယူမှုကိုငြင်းဆန်သည်။
ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည့်မည်သည့်အမျိုးအစားကိုမဆိုမည်သည့်အခြေအနေမျိုး၌မဆို eXamYo.com သည်တာ ၀ န်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
သင်ဤအခြေအနေများအားချိုးဖောက်ခြင်း (သို့) ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရပဲဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို eXamYo.com အားသင်လျော်ရမည်။
ဤရွေ့ကားအထွေထွေအခြေအနေများအနက်ရမည်ဖြစ်သည်နှင့်လက်ရှိစပိန်ဥပဒေပြုခြင်းဖြင့်အုပ်ချုပ်နေကြသည်။ ဤအခြေအနေများမှပေါ်ပေါက်လာသောအငြင်းပွားမှုများကိုစပိန်နိုင်ငံ၊ တိုလီဒိုတရားရုံးများတွင်ဖြေရှင်းရမည်။ သို့သော်၎င်းသည် eXamYo.com သည်အခြားအရည်အချင်းရှိသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတရားစွဲဆိုမှုများကိုဖြေရှင်းရန်အခွင့်အရေးကိုအသုံးချခြင်းကိုတားဆီးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒီဇင်ဘာလ 15, ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၏အော်ဂဲနစ်ဥပဒေ 1999 / 13 ။ စုဆောင်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် Luis Corraliza Sánchez၏အချက်အလက်ဖိုင်များတွင်ထည့်သွင်းခြင်း၊ ၎င်းအား၎င်း၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
eXamYo.com သို့ပေးသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များမှန်ကန်ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့တွင်ပြောင်းလဲမှုများအားလုံးကိုဆက်သွယ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်ဟုလိုင်းမှအာမခံသည်။ အချက်အလက်ပိုင်ရှင်သည် info@examyo.com သို့အီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့်လက်လှမ်းမီခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းအခွင့်အရေးကိုကျင့်သုံးနိုင်သည်။